i-Amazon iyinhlangano enkulu ye-e-commerce emhlabeni jikelele. Isebenza ngokufana kakhulu nezinye izinjini, ukuhlinzeka abasebenzisi ngemiphumela yomkhiqizo efanele kwimibuto yabo. Kuyaphawuleka ukuthi ucabanga ngokusebenza kahle nokuthi indlela engcono kakhulu yokusebenza ngayo ingashintsha njalo ngonyaka. Njenganoma yiziphi ezinye izinjini ezithandwayo, i-Amazon inezimiso zayo kanye nemihlahlandlela okudingeka ulandele ukuze ibonakale kumakhasimende akho angahle. Kuyindawo emakethe yokuncintisana kakhulu lapho uzokhipha khona abaholi bakho be-niche; udinga ukutshala ukuhlelwa kokuhlelwa komkhiqizo wakho we-Amazon.